Aiza no ahitana Left entana Locations In Alemaina? | Save A Train
Home > Travel Europe > Aiza no ahitana Left entana Locations In Alemaina?
Traveling no farany traikefa nahafinaritra, fa tokony hanao izany maimaim-poana entana, indrindra ho an'ireo layovers na raha efa maimaim-poana fotsiny andro iray i Alemaina tanàna malaza. Manana ny fanazavana ilainao ho havia entana toerana tany Alemaina nandritra ny telo lehibe ao aminy tanàna, Berlin, Munich, ary Hamburg.
Na ianao hanatrika Oktoberfest in Munich, mijoro matahora Brandenburg vavahady ao Berlin, na fety ao amin'ny antoko Vibe ny Reeperbahn in Hamburg, ireo no mora indrindra, ary fomba mety indrindra mba ho azo antoka fa tsara ny entana dia nikarakara raha hijery anao.
Left entana Locations In Alemaina: Berlin
amin'ny Tegel Airport, ho hitanao ny ankavia toerana entana ao amin'ny Terminal A dia misokatra isan'andro amin'ny 5 AM 10:30 PM. Ny vidin-javatra dia handoa dia Miovaova arakaraka ny € 7.20 ho € 9,90 ary dia miankina amin'ny haben'ny ny kitapo. Ny halavan'ny fotoana dia voafetra fitehirizana.
Ao amin'ny Schonefeld Airport, ho hitanao ny sisa toerana entana ao amin'ny Terminal D Arrival. Ny ora no Alahady ny Zoma, avy amin'ny 7:30 AM 11:30 PM sy ny Sabotsy avy 8 AM 6 PM. Ny vidin-javatra miainga amin'ny € 4 ny € 6 solon'ny tanana entana sy ny € 7 ka hatramin'ny 10 € ho an'ny ara-dalàna avy amin'ny teny anglisy entana.
Left entana Locations amin'ny Train Stations
Ny tsy hanahirana ny gara fa anareo fa izy ireo dia misokatra 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro. Ny Central Train Station (Hauptbahnhof) no toerana ho hitanao fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana Ary dia tanàna ao amin'ny fiara zaridaina ivelan'ny trano ao amin'ny faritra lehibe C.
Arakaraka ny haben'ny ny fisoloana akanjo ilainao, izy ireo vidin'izany eo € 4 sy € 6 ny andro sy ny vanim-potoana fitahirizana ambony indrindra dia 72 ora. Raha tianao nitsidika ny biraon'ny ankavia entana, iray ihany no manokatra isan'andro avy 6 AM 10 PM sy ny momba € 5 isan-zavatra.
-Peo hafa amin'ny fisoloana akanjo ahitana fitehirizana Alexanderplatz, Ostbahnhof, Potsdamer Platz sy Zoologischer Garten. Mora mahita ankavia entana toerana any Alemaina!
Left entana Locations In Alemaina: Munich
Munich Airport no tsara indrindra safidy ianao, rehefa mitsidika ny tanàna. Ny Service Center ao amin'ny Terminal 1 misokatra 24 ora ary misy toerana faharoa ao amin'ny Terminal 2 fa ny fanokafana ora dia avy 5 aho amin'ny misasakalina isan'andro.
Dia handoa eo € 5 sy € 10, arakaraka ny haben'ny ny entana ary koa ny anatiny. Zahao ny seranam-piaramanidina’ tranonkala eo anatrehanao mandeha noho ny vaovao farany sy ny seranam-piaramanidina ho an'ny ankavia entana toerana any Alemaina.
Left entana Locations amin'ny Munich Train Stations
Mitahiry entana Munich ny Central Station ho tsio-drivotra ho anao. Misy be dia be fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana ary misy famantarana ho azy ireo toerana mora foana. Ny faneva dia lany fisoloana akanjo anao momba € 4 isan'andro sy ho lehibe kokoa, ady sy teny hotsaraina-raharaha momba ny fisoloana akanjo salantsalany € 6 isan'andro. Misy na izany aza ny 72 ora fameperana fetra.
Maro toby hafa no manify ny toerana iray ihany.
Left entana Locations In Alemaina: Hamburg
Ny hany safidy no Hamburg seranam-piaramanidina. Amin'ny ankavia biraon'ny entana any Terminal 2, Level 1 Ny fiaingana ary ny misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady avy 4:30 AM 11 PM. Dia handoa eo € 5 sy € 25, miankina amin'ny habeny rehetra. Ny lehibe kokoa ny entana, ny ambony ny saran'ny, ary ny seranam-piaramanidina ihany koa ny nasain'i € 3 ho toy ny fotoana iray-isaky ny fikarakarana saran'ny entana.
Afaka mitahiry ny entana eto fa voafetra ny fotoana tsara indrindra sy ny zana-kazo mba hijery aloha alohan'ny fahatongavany. Manangòna ​​fanazavana betsaka araka izay azonao eo anatrehan'i nandeha.
Toy ny amin'ny maro amin'ireo gara any Eoropa, ianao eo amin'ny vintana amin'ny fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana izay rehetra mora mora sy misokatra 24 ora isan'andro. Ny eo ho eo ny vidiny dia 5 € ny andro sy tsy misy famerana habe.
Private Services: Ny 'Airbnb' Fa entana
Misy orinasa vitsivitsy izay mampiasa ny rafitra tena mitovy amin'ny an'i Airbnb, afa-tsy ho an'ny entana. Ianao ihany no Ilainao ny mikaroka ny toerana, manao famandrihan-toerana ary avy eo hamela ny kitapo amin'ny toerana voamarina izay no tena mety aminao. Izany no fomba tsara indrindra ny fitadiavana entana toerana sisa any Alemaina.
Insurance dia tafiditra tao anatin'ny sarany ary mitovy amin'ny orinasa ny orinasa. Ho koa fiadanan-tsaina fa ny kitapo any azo antoka tanana.
Izany no tena fanta-daza fitahirizana fanompoana izay mora ampiasaina, ary tena ara-drariny priced. Ho handoa ny sarany raikitra ny € 5 isan-kitapo isan'andro. Ny kitapo ihany koa azo antoka mahery € 800. Izany dia midika hoe izay rehetra tafiditra tao anatin'ny sarany.
Ianao fotsiny hikaroka ny vohikala ho toerana akaiky anao. Ianao dia ho afaka mifidy ny manokana 'StashPoint', ary rehefa Mitete eny ny kitapo, mampiseho ny miaramilany ary ny famandrihana ianao nandamina!
Similar tolotra ity dia ahitana Nannybag sy BagBnb. Ireo asa ireo raha ny marina misy manerana an'i Eoropa sy mora azo ampiasaina ho an'ny Alemaina.
Rehefa manao dia lavitra sy mitahiry entana ilaina, Tsy azo atao mihitsy mba ho vonona tsara indrindra. Double Jereo ny antsipiriany sy mitady vahaolana izay mety aminao sy izay alehanao. Na izany seranam-piaramanidina, gara na manamarina avy nifty tsy miankina tolotra aterineto, izany rehetra azo jerena ao amin'ny ny tsindry bokotra iray. Sambatra entana ary hamonjy vola amin'ny saran-dalana sy ny fampiasana Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Aiza no ahitana Left entana Locations In Alemaina?” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-germany/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Train Travel Alemaina, Train Travel Espaina, Train Travel Soeda, Train Travel UK, Travel Europe